Ukondla Izingulube Ngensalela Zokudla, eNingizimu Afrika
Ukondla Izingulube Ngensalela Zokudla
Ngakho yini efanelwe ngokufanelekile njenge-swill? I-Swill igama legama lendabuko yokudla noma ukudoba kokudla okuqukethe noma okuhlangene nemikhiqizo yenyama noma inyama. Ngokusho komthetho wezilwane (uMthetho wama-35 ka-1984), kuphikisana nomthetho wabalimi ukondla imfucuza enjalo, kungakhathaliseki ukuthi ivela ekhishini labo, izikebhe, izindawo zokudlela, izibhedlela noma amahhotela ezikhukhunjini, ngaphandle uma izibhamu ziphekwe okungenani ihora lokubhubhisa amagciwane. Lokhu kusho nokuthi izingulube kufanele zigcinwe kude nodoti nezinye izilwane ezifile.
Olunye udoti kanye nemikhiqizo, njengezithelo ezengeziwe kanye nemifino, izinsalela zezitshalo, njengama-stalks ommbila, amaqabunga kanye nama-cobs, kanye nemfucuza ye-factory, njenge-stale isinkwa, i-dog cubes, ubisi obunqunyiwe, amasondo okusuka kokweshizi kanye nokolweni kuvunyelwe. Uma usebenzisa le mikhiqizo, abalimi kufanele baqaphele nakakhulu ukuqinisekisa ukuthi imikhiqizo engakaze ingcoliswe nezilwane ezifile futhi ayiqukethe amakhemikhali noma amakhemikhali abingozi.
Ukondla nge-imikhiqizo yedwa kuyoba nethonya elibi empilweni nasekukhuleni kwezilwane. Ngokusho komhlahlandlela wokukhiqiza waseNingizimu Afrika we-Pig Producers Organisation, amaPigs for Profit, izingulube ezithola kuphela isinkwa se-stale, zizofaka amafutha esikhundleni sokudla futhi zingase zihlupheke ezinye izinkinga zempilo. Okufanayo kusebenza kokudla okuluhlaza okweluhlaza okweluhlaza, okumele kubonakale njengama-vitamin mix kunokudla.
Into engcono kakhulu ongayenza uma unquma ukuthi uzokondla yini izingulube zakho, kungaba ukukhuluma nesilwane sokudla okunomsoco. Umnakekeli wezokudla uzokubona ukuthi uketshezi olunempilo ye-by-products ofuna ukuyisebenzisa nokuthuthukisa ukulinganisa okulinganayo okuzosiza ukuvimbela ukuntuleka kokudla okunomsoco. Ama-pigs angayitholi i-ration elinganiselayo ehambisana nezidingo zazo ezithile, izogxila, ifaneleke kakhulu ezifweni futhi ikhule kancane.